Ny tantara sy ny fivoaran'ny logo fiara | Martech Zone
Ny tantara sy ny fivoaran'ny mari-pamantarana fiara
Alarobia, Aprily 29, 2015 Alakamisy, Aprily 30, 2015 Douglas Karr
Ny famantarana ny maso dia zava-dehibe kokoa noho ny mino olona maro. Ny sary famantarana dia tsy maneho marika fotsiny, matetika dia misy dikany marobe ary mety hahitana ny tantaran'ny orinasa aza. Orinasa maro no mahatohitra ny fanovana sary famantarana. Mety nandany vola be izy ireo, na niahiahy momba ny vidiny sy ny ezaka ilaina amin'ny famerenanana indray.
Mpino mafy orina aho amin'ny fanatsarana ny logo anao mba hitazomana azy roa hifandray amin'ny fitomboana sy ny fahamatoran'ny orinasanao ary koa hitazomana azy ho maoderina sy ilaina amin'ny mpihaino anao. Raha misy indostria iray lafo ny fanovana logo - dia ny indostrian'ny fiara. Ny logo dia tsy eo amin'ny fiantohana rehetra, hita eny rehetra eny amin'ny fiaranao izy ireo.
Topazo maso ny manaraka amin'ny fotoana miditra ao anaty fiaranao… eo amin'ny hood, ny jiro am-baravarana, ny gorodon'ny gorodona, ny fitoeran-tànana, ny vatan-kazo, ny kodiarana misy kodiarana, eny fa na dia ao amin'ny fitoeran'ny motera aza. Ary ankehitriny miaraka amin'ny fampisehoana vahaolana avo lenta, izy ireo dia soloina nomerika ihany koa. Ny ahy aza mihodina ary manidina amin'ny efijery.
Raha mandinika an'ireto logo ireto ianao dia ho hitanao fa saika misy karazana endrika sy fahatsapana azy ireo matetika izy ireo. Heveriko fa izany dia saika fepetra takiana satria natsangana tao anaty fiara rehetra izy ireo. Matetika ny mpamorona sary famantarana nentin-drazana dia mankahala izany satria izy ireo taloha dia nanome toky fa ny loko fotsy sy mainty no jerena tsara, amin'ny milina fax, hatrany amin'ny sary hoso-doko. Mbola lavitra any aoriantsika anefa ireny andro ireny.
Rehefa manohy mivoatra ireo logo, tsy azoko antoka fa handeha hoentim-po tanteraka izy ireo… saingy heveriko fa mbola hanana halaliny sy refy ho azy ireo izy ireo. Na ny endrika fisaka aza dia nisy sosona lalina.
Anisan'izany ny sary Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugot, Renault, Škoda, Vauxhall, ary Volkswagon. Manampy an'i Chevrolet aho aorian'ny infographic ho antsika any ampitan'ny dobo.
Tags: alpha romeologo alfa romeoamaz martinsary famantarana an'i mart martinAudisary audilogo autoBMWbmw logoCadillacsary famantarana cadillachevitra momba ny mpivarotra fiaraFiatlogo fiatFordford logofivoaran'ny sary famantaranatantara logoMazdasary famantarana mazdaNissanlogo nissanPeugeotlogo peugotRenaultsary famantarana renaultsezasary famantarana sezaskodasary famantarana skodavauxhalllogo an'ny vauxhallvolkswagonsary famantarana volkswagon
Inona avy ireo zava-misy mahomby amin'ny paikady media sosialy mahomby?
Hafahafa: Tsotra ny famoronana votoaty sosialy